Fijery mivantana an'i Mars sy ny volana -
Mars sy ny volana
Ity fampiharana ity dia mampiseho fampisehoana an-tsary an'i Mars sy ny volana roa, Phobos ary Deimos.
inona ny planeta akaiky indrindra ny masoandro milamina
Ny data ho an'ny fampisehoana etsy ambony dia nalaina avy amin'ny Tranonkala JPL an'ny NASA ary mandrakotra ny vanim-potoana 1900 ka hatramin'ny 2200 AD. Ivelan'io fe-potoana io dia manakaiky ny toeran'ny volana aseho.
Miaraka amin'ny fampiharana eo amin'ny toerana misy anao, ny sary (orbit sy ny haben'ny planeta) dia refesina avokoa.
Ny Rafitra Marianina
Ny rafitry ny martiana dia misy ny diabe sy ny volana keliny roa izay mihodinkodina eo akaikin'ny planeta - samy mamita ny orbitany ao anatin'ny 7 ora sy 30 ora avy.
Avy amin'ny martian ambonin'ny dia ny roa volana naka sary mifampitondra amin'ny Curiosity Rover.
Phobos, ny lehibe kokoa amin'ireo volana roa aseho etsy ambony, dia mirefy 1/3 eo ho eo ny sakany izay isehoan'ny volantsika any an-danitra.
Phobos dia zavatra madinidinika kely miendrika endrika tsy voafetra miaraka amin'ny boribory 11 km eo ho eo, ary avo fito heny noho ny Deimos. Phobos dia mivezivezy 6000 km (3.700 mi) miala ny velaran-tany Martiana, izay akaiky kokoa noho ny volana planeta fantatra rehetra. Akaiky dia akaiky ka mihodikodina haingana kokoa amin'i Mars noho ny fihodinan'ny Mars, ary mamita orita ao anatin'ny 7 ora 39 minitra fotsiny. Midika izany fa rehefa jerena avy eto ambonin'ny Mars dia miakatra izy ary apetraka indroa isaky ny 21 ora isan'andro.
Tahaka ny Volan'ny Tany, i Phobos dia mihodina amin'ny taham-pahalalana mitovy amin'ny manodidina ny planeta azy ka mampiseho hatrany ny ilany hatrany amin'i Mars.
Kambana be i Phobos ary misy lalan-drano maro voapaika ao anatiny izay mety hahatratra 30 metatra ny halaliny, 200 metatra ny sakany ary 20km ny halavany. Ireo riaka ireo dia heverina fa tsirairay Chains Chains ; ny vokatry ny fiantraikany bitika kely rehefa nanakaiky an'i Phobos ny zavatra hafa manodidina an'i Mars, dia nopotehin'ny hery misintona, ary avy eo nisy fiantraikany ireo potipoti-bato namela andilan-javaboara mifono akaiky.
Heverina fa manana vovoka manodidina ny 100 metatra sy vatolampy vaky - vokatry ny potipotan'ny fifandonana - ary manana hakitroka ambany loatra ka tsy azo atao vato ny ao anatiny. Izy io dia toa korontam-bato izay misy vato marobe isan-karazany mitazona gravitasi, ny banga eo anelanelan'ny vatolampy dia feno feno na vovoka mihosin-dra.
Deimos dia tena mitovy amin'ny zokiny lahy Phobos satria manana faritra malama izy noho ny bodofotsy misy vovoka / vovoka sy potipotiana amin'ny vava volkano misy fiantraikany.
Ny fiovaovan'ny loko dia mety vokatry ny fiparitahan'ny fitaovana ambonin'ilay tontolon'ny habakabaka, izay mitarika amin'ny maizina sy mena. Ny fitaovana ambonimbony kokoa sy mena kokoa dia tsy dia nahitana firy tamin'ny habakabaka noho ny fiatraikany na ny fivezivezin'ny vovoka ambonin'ny tany.
Deimos dia manodidina ny antsasaky ny haben'ny Phobos eo amin'ny 6 kilometatra eo ho eo ary misy fe-potoana orbital mandritra ny 30 ora 17,9 minitra. Tahaka an'i Phobos, ny fihodinany dia mihidy amin'ny vanim-potoana iorenany dia mampiseho hatrany ny ilany amin'i Mars.
vehivavy aries sy lehilahy Aquarius manao firaisana
Discovery sy anarana
Ireo volana roa dia hitan'ny Asaph Hall tamin'ny Aogositra 1877 tao amin'ny US Naval Observatory any Washington, D.C. Deimos no hita voalohany ary Phobos 5 andro taty aoriana.
Nomena anarana roa izy ireo avy amin'ny angano grika - Phobos (tahotra / tahotra) ary Deimos (horohoro / tahotra) izay niaraka tamin'i Ares rainy, andriamanitry ny ady (fantatry ny Romanina hoe Mars), ho any an'ady.
fampifangaroana ny lehilahy libra sy ny vehivavy sagittarius
inona no dikan'ny loko maitso
Leo lehilahy sy leo vehivavy tia mifanentana
firy ny planeta mandrafitra ny rafi-masoandro